18-ka Meey Waxa qoray Yuusuf Garaad.
Daawo: Madaxweyne Biixi Oo Xisbiyada Mucaaradka Ugu Baaqey Shir Deg Dega+Ujeedka Shirka
XOG-Madaxtooyada Puntland Oo Markale Abaabushay Mooshin Ka Dhana Gudoomiyihii Hore Ee Baarlamaanka Puntland
Komishankii Hore Ee Dorashoyinka Somaliland Oo Ka Hadlay Arrimo Xasaasi Ah Oo Dalka Ka Taagan
Daawo:Gudida Qandaraasyada Qaranka Oo Shaaciyey Shirkadaha Ku Guulaystay Mashaaric Xukumadu Ka Fulinayso Gobolada Sool,Sanaag Iyo Maroodi-jeex.
Daawo:Golaha Guurtida Somaliland Oo Sheegay Inay Maxkamada Ka Dacwaynayaan Golaha Barlamaanka.
Ciidamada Booliska Somaliland Oo Xidhay Hotel Calanka Soomaaliya Laga Taagay & Wararkii U Danbeeyey.
Xogo Laga Helay Wafti Ka Socda Beesha Caalamka Oo Hargeysa Imanaya+Ujeedkooda
Golaha Wakiilada Oo Dib U Celiyay Derajooyin La Siiyay Degmooyin Ay Caynaba Ku Jirto
Ciidammo Ka Tirsan Puntland Oo Xalay Lagu Weeraray Gudaha Boosaaso
18 May maad wax ka tiraahdid? ayay si soo-jeedin oo kale ah ii weydiiyeen saaxiibbo aan qaddariyo.
Somaliland waa dalkeyga iyo dadkeyga. Waa walaalahay Soomaaliyeed oo qaarkood wax i soo baray, aan soo wadashaqeynay. Waa dal iyo dad aan jecelahay oo ka mid ah taariikhdeyda dal iyo teyda shakhsi.
Markii dalkii naga dhexeeysay uu naga wada burburay, dhibkuna uu markaas dhankooda u badnaa, waxay qaateen tallaabo loo aayay oo degaannadooda ay ku nabadeeyeen dibna ugu dhisteen. Nabadda ka sokow, waxay dhiseen nidaam siyaasadeed iyo hey’ado Dowladeed oo tayo leh.
Siyaasadi wax kale ma aha ee waa nidaam ay dadka intooda badani isla oggol yihiin. Waxay samaysteen hannaan hadda u shaqeeyaynayay in ka badan laba dersin oo sannadood.
Intaas oo dhan waan ugu hambalyeynayaa. Allahna waxaan uga baryayaa in uu u xoojiyo nabadgelyada iyo horumarka.
Maalinta ay go’aansadaan in ay u dabbaaldegaanna waan ku xushmeynayaa.
Ma rabo in aan munaafaqad ku hadlo. Anigu waxaan ku soo barbaaray kuna soo shaqeeyay in Somaliland ay tahay midkood, laba Gobol oo midoobay oo wadajir u sameystay dal la yiraahdo Jamhuriyadda Soomaaliya.
Waxaa la igu tababbaray in Xamar oo aan ku dhashay iyo Hargeysa ay labaduba dalkeyga yihiin, isku sina aan cadow uga daafaco. Tusaale sahlan waxaa ah Halyeygii Xalane oo ay hooyadeey isku magaalo ka soo jeedaan in uu u dhintay asaga oo daafacaya Wajaale.
Maanta rabitaankeyga shakhsiga ahi waa midnimo ay labada Gobol isla oggol yihiin. Taa lama hayo. Xataa dariiqeedii ma muuqdo.
Gooni isu taagga Soomaaliland isaguna ma haysto heshiis Soomaaliyeed oo Midowgii 1960 looga noqday. Mana haysto sharciyad caalami ah.
Sida aan anigu ra’yi iyo rabitaan u leeyahay, ayuu muwaaddin kasta oo Soomaaliyeed uu u lahaan karaa ra’yi, ha ku noolaado Koofur ama ha ku noolaado Somaliland.
Waxaanse qirayaa in go’aanka Midnimada ama gooni isu taagga uu yahay mid ka go’aa dadweynaha Somaliland iyaga oo u maraya waddo nabadgelyo oo sharci ah.
Inteenna kale aan ku ra’yi ahaanno ama aan ka ra’yi duwanaanno e waxaan ku khasban nahay in aan rabitaanka dadweynaha Somaliland ee sharciga ah aan u hoggaansanaanno.
Hadduu rabitaanku Shacabku uu noqdo Midnimo waa sida aan jecel nahay aniga iyo inta ila aamminsan Midnimada ee Koofur iyo Woqooyiba leh. Haddii uu rabitaanka shacaka Somaliland uu noqdo Gooni isu-Taag waan ku xushmeynayaa, si niyad ah ayaan u aqbalayaa. Ka dibna waan u dalxiis tegayaa, haddii aan u baahdana waan u shaqo tegayaa ama aan degayaa aniga oo waddo sharci ah u maraya.